Ukujika -K-Tek Machining Co., Ltd.
Yintoni ukujika kwe-CNC?
I-lathe ye-CNC sisixhobo esisebenza ngokuchanekileyo, esisebenza ngokukuko isixhobo somatshini esizenzekelayo. Ukuxhotyiswa nge-multi-station turret okanye i-turret yamandla, isixhobo somatshini sinoluhlu olubanzi lwetekhnoloji yokuqhubekeka, inokuqhubekeka iisilinda ezinemigca, iisilinda ezi-diagonal, ii-arcs kunye nezinto zomsebenzi ezahlukeneyo ezintsonkothileyo ezinje ngemisonto kunye nemijelo, ngokudityaniswa komgama kunye nokujikeleziswa kwesetyhula.
Ekuguqukeni kwe-CNC, imivalo ebonakalayo ibanjelwe kwi-chuck kwaye ijikeleziswa, kwaye isixhobo sondliwa kwii-engile ezahlukeneyo, kwaye izixhobo ezininzi zinokusetyenziselwa ukwenza imilo oyifunayo. Xa iziko linemisebenzi yokujika kunye nokugaya, unokumisa ukujikeleza ukuvumela ukugaya ezinye iimilo. Obu buchwephesha buvumela iintlobo ngeentlobo zeemilo, ubukhulu kunye nohlobo lwempahla.
Izixhobo ze-CNC lathe kunye neziko lokujika zifakwe kwi-turret. Sisebenzisa isilawuli se-CNC ngesixhobo "sexesha-lokwenyani" (umz. Inkonzo yobuvulindlela), ekwamisa ukujikeleza kwaye yongeza eminye imisebenzi enje ngokubhola, imijelo kunye nendawo yokugaya.
Ukuba ufuna ukujika kwe-CNC, singomnye wabenzi abanobuchule nabanokhuphiswano, iqela lethu linokuvelisa iimpahla ngokuchanekileyo nangexesha. Uluhlu olubanzi lwezinto ezinokuveliswa luvumela i-K-Tek ukuba ibonelele ngeesampulu ezizodwa. Izixhobo zethu zemveliso yobuninzi ziqinisekisa ubhetyebhetye nokuzithemba kwethu. Kwaye siya kukhawulelana neemfuno zeshishini ngalinye esilikhonza ngokwemigangatho eyomeleleyo engqongqo. Sigxila kumgangatho kunye nenkonzo yabathengi.
I-CNC yokuguqula iindawo esizenzayo
Sivelise uluhlu olubanzi lweenxalenye ze-CNC eziguqukayo kwiminyaka eyi-10 kwaye iqela lethu lobunjineli lisoloko linika abathengi bethu izisombululo eziluncedo zokusombulula iingxaki zabo ekwenzeni iindawo ezijika i-CNC. Siqinisekisa ngokungaguquguqukiyo machining ekumgangatho ophezulu, nkqu kwimeko yamalungu antsonkothileyo, sisebenzisa iimodyuli zomatshini ezintsonkothileyo kwaye sisebenzisa i-lathe ye-CNC enobuchule bokusebenzisa umatshini.
Machining Option In CNC Ivula
Kunye nezixhobo zethu zomsebenzi zakutshanje neziphezulu ezibandakanya amaziko okujika e-CNC kunye noomatshini bokujika aba-6. Sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuvelisa. Nokuba iindawo ezilula okanye ezintsonkothileyo zijikile iinxalenye, ezinde okanye ezifutshane zijikile iinxalenye ezichanekileyo, sixhotyiswe kakuhle kuwo onke amanqanaba obunzima.
Imveliso yohlobo machining / zero series production
Imveliso encinci yebhetshi
Ukuveliswa kobungakanani bebhetshi obuphakathi
Ezi zinto zilandelayo ziqinile ziqhele ukusetyenziswa: i-aluminium, intsimbi engenasici, ubhedu, i-nylon, isinyithi, i-acetal, i-polycarbonate, i-acrylic, ubhedu, i-PTFE, i-titanium, i-ABS, i-PVC, ubhedu njl.